सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णयप्रति गण्डकी प्रदेश कास्कीकाे आपत्ति – Samacharpati
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णयप्रति गण्डकी प्रदेश कास्कीकाे आपत्ति
पाेखरा, १० जेठ । एकल महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णयप्रति मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह गण्डकी प्रदेश र कास्कीले आपत्ति जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०७६ चैत २६ मा ६० वर्षमुनिका एकल महिला र निलो कार्ड प्राप्त अपाङ्गता भएकालाई पत्र पठाएर स्थानीयवासीलाई सुविधा कटौती गर्न भनेपछि एकल महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले आपत्ति जनाएका हुन् ।
समूहका प्रदेश संयोजक प्रमिला तझ्याले विषम परिस्थितिमा झन् बढी राहतको आवश्यक पर्ने समूहलाई दिँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार भएको बताउनुभयो ।
उहाँले विज्ञप्तिमार्फत असहज परिस्थितिमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । तझ्याले सहाराविहीन लाखौँ एकल महिला र अपाङ्गता भएकाको वास्तविक जीवनको अध्ययन नै नगरी गरिएको निर्णय न्यायोचित नभएको बताउनुभयो ।
समूहका जिल्ला अध्यक्ष जुना केसीले पनि भत्ता कटौती गरिएको निर्णयले एकल महिलालाई दुखी बनाएको बताउनुभयो । केसीले भन्नुभयो, “महामारीको बेला थप राहत र भत्ता दिनुपर्नेलाई भत्ता कटौती गरेर सरकारले गलत निर्णय गर्यो, मासिक रु दुई हजार भत्ताले पनि जीवनलाई सहज बनाउँदै अघि बढेकाको खुशी यतिबेला खोसिएको छ ।” केसीले एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनको भावना विपरीत रहेकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार ६० वर्षमुनिका करिब साढे तीन लाख एकल महिलाले भत्ता बुझ्दै आएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घमा अनुसार मासिक एक हजार ६०० निलो कार्डवाहक सङ्ख्या करिब ७० हजार थियो ।
हेर्नुहोस् ! कपाल प्रत्यारोपण गर्दा हुन्छ यस्तो फाइदा !
नेपाल एयरलाइन्सले आज जापानको नारितामा चार्टर्ड उडान गर्दै